Ergayga Ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Anaadiif oo Is-casilay |
Ergayga Ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Anaadiif oo Is-casilay
Khamiis, June 19, 2014 (HOL) — Ergayga Midowga Afrika ee Somalia, Maxamed Saalax Anaadiif ayaa xilka iska casilay, kaddib markii uu muran soo dhex-galay isaga iyo qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadu kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Is-casilaaddiisa ayaa la sheegay inay salka ku hayso qorshe uu doonayay inuu kaga saaro magaalada Kismaayo ciidamada Kenya ka socda ee ka tirsan AMSIOM oo ay horay uga cabatay dowladda Soomaaliya si loogu bedelo kuwo ka socda ciidammo ka socda Jabuuti iyo Burundi.
Danjire Anaadiif ayaa la sheegay inuu qoraalka iscasilaaddiisa toddobaadkii hore u gudbiyay guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika lagana ogolaaday, iyadoo la filayo inuu kaga dhawaaqo is-casilaaddiisa munaasabad maanta ka dhacaysa Muqdisho.
Anaadiif oo 58-jir ah ayaa kasoo jeeda dalka Jaad (Chad), isagoo sannadkii 2012-kii xilka kala wareegay ergaygii ka horreeyay ee Abuubakar Diarra, isagoo xilal kala duwan kasoo qabtay dalkiisa kuwaasoo uu ka mid yahay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Chad oo uu hayay sannadihii u dhexeeyay 1997 illaa 2003-dii.
Tallaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo uu qaato wakiil urur caalami ah uu u soo magacaabay Soomaaliya, waxaana danjire Anaadiif uu ahaa madaxa guud ee AMISOM iyo ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Wakiilku wuxuu dhawaanahan ka hadlayay howlgallada looga horjeedo Al-shabaab iyo qorshayaasha uu calaamku ku doonayo inuu ku horumariyo Soomaaliya kaddib 23-sano oo colaado sokeeye ah, isagoo dhawaan dalbaday in caalamku uu gacan ka siiyo Puntland dib u dhiska deegaannadeeda.